Falanqaynta filimada. Dhammaan filimada ugu fiican ee ay sameeyeen agaasimayaal badan, iyo sidoo kale aragtidayda iyo dhaleeceynta waxqabadka jilayaasha.
3-da Filim ee ugu sarreeya Russell Crowe
Way mudan tahay in Russell Crowe uu ku tuuro xanaaq badan si uu ilo u noqdo qaar badan oo ka mid ah muuqaalkiisa. Waxayna u qalantaa in ay u muuqato in jir ahaan looga tagay sannadihii la soo dhaafay (ama si la mid ah waxaa lagu sheegay in ay jirto dhibaato kale ama xitaa shuruudaha qoraalka). Laakiin maya…
Javier Cámara 3-da filim ee ugu wanaagsan
Waxay iila muuqataa in shaleemada Isbaanishka ay tahay mid dimuqraadi ah, oo aad loogu hagaajiyay xaqiiqada ficillada. Marka la barbardhigo Hollywood, waxaan ula jeedaa. Sababtoo ah yankeeland haddii aad qurux badan tahay waxaad baran kartaa inaad ku dhaqdo duulimaadka, dhanka kale waxaad ka yaabisay daawadayaasha muuqaal ahaan…
3-da Filimood ee ugu Fiican Daniel Day-Lewis Movies
Marka uu wakhtigu sii socdo, waxa aynu waayi doonaa garaadka fasiraada sida Daniel Day-Lewis. Waxay noqon doontaa arrin ku saabsan xoojintaas uu door kasta ku qaatay, ujeedadu waxay tahay inuu malaha ka soo gaadhay dhogorta iyo jeexjeexyadaas oo mararka qaarkood ku weerara kuwa wax kasta ka tagaya dhinac kasta ...
Robert de Niro 3-da filim ee ugu sarreeya
Aan iloobin Robert de Niro kii ugu dambeeyay si uu u kiciyo jilaa kale oo weyn oo uu mar uun ahaa. Waxay u ekaan kartaa mid adag laakiin waa sidaas, mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee celluloid ayaa muddo dheer ku soo maray murugo ka badan ammaanta filimada iyada oo aan meeshaas laga helin shaleemada caadiga ah ...
Laga soo bilaabo hawlgabkiisii ​​dahabiga ahaa ee lugta Lakers track, Jack Nicholson wuxuu weli muujinayaa firfircoonida aan caadiga ahayn ee uu had iyo jeer siin jiray jilayaashiisa. Tafsiirrada ka soo muuqday 70-meeyadii hore ee fogaa iyo maskaxiyan ilaa iyo qarnigii XNUMXaad. Orod aan hore loo arag oo xidigtan maanta...
Top 3 Matt Damon Movies
Marka ay timaado buug-ururinta Matt Damon waxaan heli karnaa dhibaatooyin. Ma fududa in lagu calaamadiyo nin isaga oo kale ah, kaas oo u gudbi kara saaxiibkaagii carruurnimada kaas oo aanad waligaa malaynayn inuu u ciyaarayo halyey filim iyo in ka yar nooca Brad Pitt ee wadnaha. Haddana waa…
3-da Filim ee ugu sarreeya Jennifer Lawrence
Atariishada ururisa diiwaanka tarjumaadda sidii haddii wanaaggeeda chameleon ay ahayd wax fudud in lagu dhaqmo. Shaki kuma jiro in Jennifer Lawrence ay ku farxi doonto agaasime weyn oo hore sida Hitchcock. Sababtoo ah dhexdeeda waxaan ka heli karnaa asalkaas aan la tuhunsanayn ee shineemadu had iyo jeer raadiso arrin la yaab leh. Wax…
3-da filim ee ugu wanaagsan Luis Tosar
Waxaa jira jilayaal qumman oo noocee ah. Luis Tosar iyo shaki la'aan macneheeda ugu ballaaran waa mid ka mid ah kulammada ugu farxadda badan filimada Isbaanishka. Oo waa in jilaagan Galician uu muujin karo xumaan mid kasta oo ka mid ah wakiiladiisa; ama caksigeeda,…
Top 3 Keanu Reeves Movies
Way adag tahay in laga fikiro Keanu Reeves oo si degdeg ah isaga dhigo jilaa gaar ah. Haddi ay noqoto go'aannadiisa, oo ay ku riixayaan dalabaadka shaqada ama sidoo kale, dabcan, horumarinta tafsiirnimada, Keanu da'da weyn ayaa had iyo jeer naftiisa dib ugu soo celinayay xawaare qasab ah. Wiilkaas oo sawirkiisa daboolay...
3-da filim ee ugu wanaagsan Mario Casas
Aniga iyo Mario Casas wax yaab leh ayaa igu dhacay. Dhinac, waxaan u maleynayaa inuu yahay jilaa wanaagsan, laakiin dhanka kale, isla dabeecadda ayaa mar walba la ii tilmaamaa, iyada oo aan loo eegin doorka aan ciyaaro. Waa in ay noqotaa arrin ku saabsan joogitaankiisa caanka ah ama codkiisa hooseeya, sida dadaalka lagu doonayo in lagu xanto…
Bogga1 Bogga2 ... Bogga6 Xiga →